November 2018 - Update New
မန္တလေးတောင်ပေါ် စက်လှေကားအမြင့်မှ အမျိုးသားတစ်ဦး Selfie ရိုက်ရာမှ ပြုတ်ကျသေဆုံး…
November 30, 2018 Naing 0
မန္တလေးတောင်ပေါ် စက်လှေကားအမြင့်မှ အမျိုးသားတစ်ဦး Selfie ရိုက်ရာမှ ပြုတ်ကျသေဆုံး… မန္တလေး နိုဝင်ဘာ ၃၀ မန္တလေးတောင်တော်ပေါ်တွင် ယနေ့ နိုဝင်ဘာ(၃၀)ရက် မွန်းလွဲ(၁)နာရီ(၄၅)မိနစ်အချိန့်က အမျိုးသားတစ်ဦး တောင်ပေါ်သို့ စက်လှေကားဖြင့် ဘုရားဖူးရန် တက်ရောက်ပြီး စက်လှေကားအပေါ်ဆုံးသို့ အရောက်တွင် လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် Selfieရိုက်ရာမှအရှိန်လွန်၍ ပြုတ်ကျသေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ […]
119 ရဲ့ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲကို အမိုက်စားဖက်ရှင်နဲ့ တက်ရောက်လာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် November 30, 2018 admin Comments Off on 119 ရဲ့ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲကို အမိုက်စားဖက်ရှင်နဲ့ တက်ရောက်လာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်အလှပုံရိပ်လေးတွေကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေပိုပြီးချစ်ခင်အားပေးလာကြတာကတော့မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေးသင်ဇာဝင့်ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကြော်ငြာလေးတွေအများဆုံးရိုက်ကူးရပြီးပရိတ်တွေကလည်းသူ့ရဲ့ပုံရိပ်တိုင်းကိုမပြတ်အားပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဝေဖန်မှုတွေရှိပေမယ့်ပရိတ်တွေအတွက်အနုပညာအလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းနေတာပါ။ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကိုပရိတ်သတ်တွေအတွက်အမြဲတင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ အမိုက်စားပွဲတက်Fashionလေးနဲ့ 119 ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲတက်ရောက်လာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ပုံရိပ်လေးကတော့ပရိတ်သတ်အသက်ရှူသံတွေရပ်တန့်သွားစေလောက်တာပါ။သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေကလည်းသင်ဇာရဲ့ပုံရိပ်တိုင်းကိုအားပေးပြီးချစ်ခင်နေကြတာပါ။ […]
သင်သိန်း ၁ သောင်း ဆုကြီးပေါက်ခဲ့ပါလျှင် ထုတ်ယူရန် မှတ်သားစရာ အချက်များ
သင်သိန်း ၁ သောင်း ဆုကြီးပေါက်ခဲ့ပါလျှင် ထုတ်ယူရန် မှတ်သားစရာ အချက်များ ​အောင်​ဘာ​လေထီ​ပေါက်​သူများ ထီဆု​ငွေထုတ်​ရာတွင်​ အဆင့်​ ၃ ဆင့်​ကိုလုပ်​​ဆောင်​ရပါသည်​။ အဆင့်​ ၁။ သန်း​ခေါင်​စာရင်း မူရင်းပြ၍ မိတ္တူ ​ပေးရပါသည်​။* မှတ်​ပုံတင်​ မူရင်းပြ၍ မိတ္တူ ​ပေးရပါသည်​။* ပတ်​ပို့စ်​ဓာတ်​ပုံ ၁ […]
Vin Diesel ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဘဝကောက်ကြောင်း
XXX ရုပ်ရှင်နဲ့ Fast & Furious ရုပ်ရှင်တွေနဲ့အတူ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တဲ့ ဟောလိဝုဒ်မင်းသား Vin Diesel ကိုမြန်မာနိုင်ငံက ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေ သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဟောလိဝုဒ်မှာ အောင်မြင်မှုရရှိဖို့ဆိုတာ တကယ့်ကို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ အနုပညာလမ်းခရီးကို လျှောက်လမ်းကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တဦး ဖြစ်ဖို့အတွက် ဇွဲလုံ့လ၊ […]
ကိုးနှစ်ကျော်အချစ်ရေးရဲ့လျို့ဝှက်ချက်ကိုပြောပြတဲ့ လွှမ်းပိုင် ဒုံးပျံစီးရီးနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ အဆိုတော်လွှမ်းပိုင်ဟာ အခုဆိုရင် ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေရိုက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်နေပါပြီ။ လွှမ်းပိုင်ဟာ သရုပ်ဆောင်ရာမှာလည်းထူးချွန်ပြီး အသက်ဝင်တာကြောင့် မင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ်ပရိသတ်လက်ခံအားပေးမှုကိုရနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လွှမ်းပိုင်က Bobby Soxer နဲ့ချစ်သူသက်တမ်း ကိုးနှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပြီးအချိန်တွေအကြာကြီးခိုင်မြဲနေတဲ့အချစ်ရေးရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်ကိုပြောပြပေးသွားပါတယ်။ လွှမ်းပိုင်က သူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ်ဇာတ်ကားကြီးရုံတင်တော့မှာမို့ […]
တက္ကသိုလ်မှာ ဘယ်လိုချစ်သူမျိုးကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ
မိမိထက် အသက်ကြီးတဲ့ ( စီနီယာတွေ)ကို ချစ်ကြည့် မလား နည်းနည်း တော့ စဉ်းစားပါ အသက်ကြီးတဲ့ (စီနီယာ) တွေကို ချစ်ရတာ တော့ သိပ်ပီး ခက်တယ် အငယ် ဆိုပြီး ခေါက် ခေါက် ထားတတ် တယ် မျှော်လင့်ချက် တွေ သိပ်ပီး […]
အဆိုပြိုင်ပွဲဒိုင်လုပ်ဖြစ်ရင် ဒဲ့ပဲဖြုတ်မှာဆိုတဲ့ ထူးအယ်လင်း
အနှစ်သာရရှိတဲ့ သီချင်းကောင်းများစွာကို သီဆိုခဲ့ပြီး ပရိသတ်အားပေးလက်ခံမှုကို ရရှိထားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကျော် တေးသံရှင် ထူးအယ်လ်လင်းကတော့ လက်ရှိအအချိန် Facebookမှာ နာမည်ကြီး လူသိများနေပြီဖြစ်တဲ့ ခြိမ့်ကေကို ခေါ် ငှက်ပျောသီးကို အတည်ပေါက်နဲ့ တလွဲတွေလုပ်ပေမဲ့ သူက တကယ်ရိုးသားလို့ ကြိုက်ပါတယ်ဆိုပြီး မီဒီယာတွေနဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဖြေဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ […]
ကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့ မိန်းမက ဘယ်လောက်တန်သလဲ ….? ( ဖတ်​ကြည့်​ပါ )
ကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့ မိန်းမက ဘယ်လောက်တန်သလဲ….? ( ကျော်မသွားပါနဲ့နော်) ကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့ မိန်းမက ဘယ်လောက်တန်သလဲ ….? ( ဖတ်​ကြည့်​ပါ ) ကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့ မိန်းမက……ဖတ်​ကြည့်​ပါ ဘယ်လောက်တန်သလဲ ? လောကကြီးမှာ မိန်းမတော်တော်များများက မိမိရင်သွေးလေးတွေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာဖို့အတွက်နဲ့ ကိုယ်ဝန်စဆောင်ချိန်ကစပြီး လုပ်နေကြလုပ်ငန်းတွေ ရပ်ပစ်လိုက်ရတယ်… […]
သာသာနာ့ဘောင်မှာ ပျော်သလောက်နေသွားတော့မယ့် ကျော်ရဲအောင်
သာသာနာ့ဘောင်မှာ ပျော်သလောက်နေသွားတော့မယ့် ကျော်ရဲအောင် သရုပ်ဆောင်ကျော်ရဲအောင်တစ်ယောက်ကတော့ ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့လေးမှာ သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးနဲ့အတူ သာသနာ့ဘောင်ထဲကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးကတော့ အသက် (၄၀) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ သာသနာ့ဘောင်ထဲဝင်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ (၅) ရက်ကြာဝင်ရောက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ကျော်ရဲအောင်ကတော့ ယနေ့ နိုဝင်ဘာ […]
သာသနာ့ဘောင် သို့ ဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦး ပြေတီဦးမွေးနေ့မှာ ပြေတီဦးနဲ့ အတူ ကျော်​ရဲအောင်​ ကိုပေါက်​တို့နဲ့ အခြား အနုပညာရှင်များလည်း လည်းသာသနာ့ဘောင်​သို့ဝင်​ရောက်​ မွေးနေ့မှာ သာသနာ့ဘောင် သို့ (၅)ရက်တာ ဝင်ရောက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်..။ အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင် ပါရှိပါတယ်။ သာသနာ့ဘောင် သို့ ဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ […]